Bogga Twitterka hay’ada WHO qaybteeda Ethopia oo fadeexad wayn ay soo wajahday. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Bogga Twitterka hay’ada WHO qaybteeda Ethopia oo fadeexad wayn ay soo wajahday.
Bogga Twitterka hay’ada WHO qaybteeda Ethopia oo fadeexad wayn ay soo wajahday.
Waxaa maanta aad Baraha bulshada loogu hadal hayay fadeexad wayn oo soo wajahday bogga ay twitterka ku leeyihiin hay’ada caafimaadka aduunka WHO qaybteeda Ethopia kaas oo loogu jawaabay qof aragtidiisa ku dhiibtay bogiisa gaarka ah, Qofka loo jawaabay ayaa qoray “ dadka dhibaatada ka wado dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya waxaa maalgelinaysaa dowladda federaalka Itoobiya”sidoo kale waxa uu intaas raaciyay in ay doonayaan inay dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya ay ka huriyaan dagaal qabaa’il islamarkaasna uu qorshuhu yahay in kicinta qabaa’ilka la doonayo in xilka looga tuuro Cabdi Maxamuud Cumar.
Qof isticmaalayay Bogga hay’ada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa sidaan ugu jawaabay “Beenlow! Si fiican ayaad u ogsoon tahay cidda malgelisa ciyaal suuqa. Xaqna uma lihid in aad u nisbayso xukuumadda federaalka adigoo xigasho dhex galinaya” arinkaan ayaana filanwaa ku noqotay dadka ku xiran bogga Who iyo kuwa isticmaala Twitterkaba.